एउटा हलीको दृष्टान्त ! [लक्ष्मणरेखा] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ माघ १३, मंगलवार १२:३३ गते
एकपटक देवर्षि नारदले भगवान् विष्णुसँग सोधेछन्— ‘भगवान्, तपाईंको सबैभन्दा ठूलो भक्त कुन हो ?’ नारदले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने कुरा भगवान् विष्णुले सजिलै बुझ्नुभयो र उनीतिर फर्किएर भन्नुभयो— ‘पर एउटा गाउँ छ, त्यही गाउँमा खेतीकिसानी गरेर बस्ने किसान मेरो सर्वप्रिय भक्त हो ।’ भगवान् विष्णुको पत्युत्तरले देवर्षि नारद निराश भए । अनपेक्षित उत्तरले देवर्षिको ओठतालु सुक्यो । उनलाई तत्काल प्रतिक्रिया गर्न मन लाग्यो । उनले भने— ‘भगवान्, तपाईंको प्रिय भक्त त म हुँ भन्ने लाग्छ तर म नै सर्वश्रेष्ठचाहिँ किन हुन सकिनँ ?’ भगवान् विष्णुले भन्नुभयो— ‘ठीक छ, मैले तिमीलाई सर्वश्रेष्ठ भक्त नमानेर त्यो किसानलाई किन मानेँ भन्ने कुरा जान्ने इच्छा छ भने उसकहाँ गएर उसको बिहानदेखि बेलुकीसम्म गर्ने कामका बारेमा जानकारी लिएर आऊ अनि म सबैकुरा स्पष्ट गर्ने छु ।’
भगवान् विष्णुको आज्ञापछि नारद विष्णुभक्त किसानको घरमा पुगे । नारदले देखे— किसान बिहान सबेरै उठेर केही समय भगवान् विष्णुलाई स्मरण गर्दोरहेछ । त्यसपछि मीठोपिठो जे पाकेको छ त्यही खाएर हलो जोत्न जाँदोरहेछ । दिनभर खेतमा जोतेर आइसकेपछि गोरूलाई दानापानी दिनु उसको दिनचर्या रहेको पनि नारदले देखे । यति काम सकेर किसान फेरि शान्तसँग बसेर भगवान् विष्णुलाई सम्झने काममा लागेपछि तयार भएको भोजनपश्चात् केही समय विश्राम गरी सुत्ने गर्दोरहेछ । नारदले किसानको यो दिनचर्याको आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए ।
किसानको दैनिक क्रियाकलापको अवलोकन गरिसकेपछि नारद भगवान् विष्णुनजिक गए र निवेदन गरे— ‘भगवान्, त्यो किसानसँग त तपाईंलाई सम्झिने फुर्सद नै छैन । ऊ आफ्नै काममा व्यस्त छ । म त दिनरात तपाईंकै नामको उच्चारणमा मस्त हुने गर्दछु । मैले सबै काम छोडेर तपाईंको नाम मात्र बारम्बार स्मरण गरिरहेको छु, तापनि किन मभन्दा त्यो किसानलाई हजुरले सर्वश्रेष्ठ मान्नुभयो ? उसमा भन्दा ममा के कुराको कमी तपाईंले महसुस गर्नुभयो, के म जान्न सक्दछु ?’
भगवान् विष्णुले नारदको प्रश्नको उत्तर नदिएर कुरा टार्दै एउटा अमृत भरिएको कलश दिँदै भन्नुभयो— ‘नारद, तिमीले यो कलश लिएर त्रैलोक्यको परिक्रमा गरेर आऊ । तर, याद राख कलशको एक थोपा अमृत पनि भुइँमा खस्न नपाओस् । यदि कलशको एउटा मात्र थोपो भुइँमा खस्यो भने पनि तिमीले अहिलेसम्म सञ्चित गरेको सारा पुण्य नष्ट भएर जाने छ । तिमी आएपछि तिम्रा अनेक जिज्ञासाबारे छलफल गरौँला ।’
भगवान् विष्णुको आज्ञालाई सहर्ष शिरोधार्य गर्नुको विकल्प नारदसँग थिएन । आपूmलाई दिइएको कलश बोकेर नारद तीनै लोकको परिक्रमा गर्न भनी हिँडे । निश्चित समयपछि उनी परिक्रमा सकेर भगवान् विष्णुको सम्मुखमा हाजिर भए । उनले भने—‘भगवान् हजुरको आज्ञाबमोजिम त्रैलोक्यको परिक्रमा सम्पन्न गरी म आइपुगेको छु । अमृतको एउटा थोपो पनि कतै खस्न पाएको छैन ।’
भगवान् विष्णुले भन्नुभयो— ‘नारद, मलाई खुसी लाग्यो, तिमी यति छिटै त्रैलोक्य परिक्रमा गरी आइपुगेछौ । भन, तिमीले यसबीचमा कतिपटक मेरो नाम लियौ, मलाई सम्झियौ ?’ नारदले भगवान्सँग बेलीबिस्तार गरे— ‘प्रभो, म परिक्रमामा व्यस्त थिएँ । परिक्रमाका लागि हजुरले मलाई कलश पनि दिनुभएकाले अमृतको थोपो नखसोस् भन्ने कुरामा मेरो गहिरो ध्यान थियो । मेरो सम्पूर्ण ध्यान त्यही कलशमा केन्द्रित भएका हुँदा मैले एकपटक पनि हजुरलाई सम्झन भ्याइनँ, हजुरको स्मरण गर्न सकिनँ ।’
नारदको जवाफले भगवान् मुस्कुराउनुभयो र नारदलाई स्पष्ट पार्नुभयो— ‘नारद, हेर ! तिमीले परिक्रमाका समयमा कलशबाट आफ्नो ध्यान हटाएर एकपटक पनि मलाई सम्झन सकेनौ तर त्यो किसान आफ्ना कयौँ कामहरु गरेर पनि मलाई कम्तीमा दिनको दुईपटक त सम्झँदोरहेछ ! यद्यपि उसले दिनमा मलाई दुईपटक मात्र सम्झन्छ, तर निरन्तर सधैँ सम्झन्छ । तमाम कामका बीच पनि उसले दिनको दुईपटक मेरो नाममा फुर्सद निकाल्छ, पलेँटी कसी दुवै आँखा चिम्लन्छ र मेरो स्मरण गर्दछ । उसले आफ्नो कामलाई मेरो स्मरणसँगै जोडेर सम्पन्न गरेको छ र मेरो नामलाई उसले आफ्नो कामसँगै जोडेर स्मरण गरेको छ । यसैले ऊ मेरो सर्वश्रेष्ठ भक्त हुन सक्यो ।’
भगवान् विष्णुले देवर्षि नारदलाई अझ प्रेमले सम्झाउनुभयो— ‘नारद, के तिमीमा अझै पनि किसानभन्दा आपूm नै सर्वश्रेष्ठ भक्त भएको घमण्ड छ ? आफ्ना समस्त काम गरेर पनि जसले मलाई अत्यन्त श्रद्धा, विश्वास, प्रेम र भक्तिका साथ सम्झन्छ ऊ नै मेरो सर्वश्रेष्ठ भक्त हुन सक्छ ।’ नारदमा रहेको भक्तिको अहङ्कार पानीपानी भएर गयो । उनले सर्वश्रेष्ठ भक्तिको लक्षणबोध गरे र त्यस्तै भक्तिका लागि प्रयत्न गर्ने सङ्कल्प गरे ।
भक्ति भनेको सर्वस्वीकृतिको पवित्र अवस्था हो । कसैप्रति पनि हामीभित्र यदि गहिरो निष्ठा, विश्वास र श्रद्धा छ भने ऊ र उससँग जोडिएका सबैप्रति हामीमा प्रेमभाव हुनेगर्दछ । यो संसार विचित्रको छ । परमात्माको यो लीला अपरम्पार छ । हामीले सोचेभन्दा धेरै विषय र रहस्यहरु ब्रह्माण्डको यो गहिराइमा लुकेर बसेका छन् । हामीसँग यदि प्रशस्त ऊर्जा र क्षमता छ भने अरुसँग त्यो नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । सबै व्यक्ति समान सम्भावना लिएर जन्मिएको हुन्छ । फरक व्यक्तिको मिहिनेत र श्रममा हुने गर्दछ । हामीले कति श्रम गर्दछौँ वा कति लगनशील हुन्छौँ, त्यति नै हामीबीचका उपलब्धिहरुमा विविधता आउने गर्दछ । मानिस–मानिसबीचको यो विविधताकै आधारमा हामी जन्मजात निकृष्ट वा श्रेष्ठ भन्ने हुँदैनौँ ।
हामीले अर्काको अस्तित्वलाई कहिल्यै पनि अस्वीकार गर्नुहुँदैन । हामी परमात्माका सन्तान भएकाले उनीप्रति यदि हामीले विशेष भक्तिभाव प्रकट गर्ने गर्दछौँ भने अरुले पनि उनीप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्दछन् भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । फुर्सदमा त सबैले सबैलाई सम्झन्छन्, तर व्यस्तताका बीचमा पनि जसले प्रभुको स्मरण गर्दछ, उही उनका लागि विशेष प्रिय हुनेगर्दछ ।
जीवन भनेको सबैको जोड हो । कोरा श्रम र कोरा भक्ति दुवै उस्तै हुन् । भगवान्को भक्तिका लागि घर, परिवार, समाज सबै छाड्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । घर, परिवारका बीचको कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि हामी परमेश्वरका प्रिय बन्न सक्दछौँ । बरू भगवान् घर, परिवार र समाजभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका पछि लाग्नेलाई त्यति मन पराउनुहँुदैन । भगवान्को भक्तिका लागि पूर्णकालीनरुपमा घर छोडेर धार्मिक र आध्यात्मिक हुनुपर्छ भन्ने कुरामात्रै सत्य होइन ।
त्यसैले, धार्मिक र आध्यात्मिक तीर्थस्थलका मानिस बढी आशावादी हुने गर्दछन् । धार्मिकस्थलको भ्रमणमा जाने तीर्थालुहरुको दान दिने प्रचलनले त्यस क्षेत्रका धार्मिक मानिसमा मगन्ते वृत्तिको विकास भएर गएको छ । बरू घरगाउँका मानिसमा कसैलाई केही दिऊँ, खाऊँ, सहयोग गरुँ भन्ने भावना हुन्छ । त्यसैले, उनीहरु त्याग र दानकै लागि विभिन्न तीर्थस्थल घुमेर आपूmमा दानवृत्तिको विकास गर्दछन् ।
हामीकहाँ हरेक काममा अभिनयात्मकता हाबी भएर गएको छ । हरेक कामहरु उत्तिकै मह¤वपूर्ण छन् भन्ने यथार्थ व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन । खासगरी धर्म र अध्यात्मको परम्परित व्याख्या गर्नेहरुले गृहस्थहरुमाथि गर्ने गरेको टिप्पणी र लिएको दृष्टिकोण सुन्दा अत्यन्त पीडाबोध हुनेगर्दछ । हामीकहाँ दुई अतिहरुले नै अध्यात्मको खति गरेका छन् । एकथरी ती, जसले घरपरिवार नत्यागी, जोगी नभई र पूर्णकालीन नभई धर्म गर्न सकिँदैन भन्ने विचार लिने गर्दछन् र अर्काथरी ती जसले जेजसो गरे पनि, जे खाए पनि जसो गरे पनि हुन्छ, आफ्नो मनलाई मार्नुहँदैन, सधैँ मनलाई प्रसन्न तुल्याउनुपर्छ र उसले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने विचार धारण गर्दछन् । यी दुवैले सन्तुलित बाटो भुलेका हुन्छन् । तिनले न त भौतिक संसारको सौन्दर्यानुभूति गर्न सक्छन्, न त आध्यात्मिक जगत्को शाश्वत आनन्दको मजा लिन नै ।
कर्तव्य परमात्मालाई बिर्साउने विषय होइन, यो त परमात्मालाई बारम्बार स्मरण गर्ने विधि हो । किसान गतिशील छ, उसको निश्चित समय तालिका छ । आफ्नो निश्चित तालिकाभित्र उसको कर्तव्य र भक्तिको योग सम्पन्न हुने गर्दछ ।
अहंले कहिल्यै पनि व्यक्तिको उचाइलाई बढाउँदैन । बरू यही अहंको प्रभावमा व्यक्तिको साबिकको उचाइ पनि घटेर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ । नारदजीलाई म सबैभन्दा ठूलो भक्त हुँ भन्ने अहं थियो । उनले आपूmजस्तै सबै परमात्माका वंशज हुन्, एउटै परमेश्वरका सन्तति हुन् र उनीहरुमा पनि आपूmमा जस्तै सम्भावना हुन्छ भन्ने सत्यलाई बुझ्न सकेनन् । सायद घमण्डका बेला मानिसमा विवेक पराजित हुनेगर्दछ र नै नारदले आपूmलाई बाहेक अन्य कसैलाई पनि परमात्माको भक्तका रुपमा देख्न सकेनन् । जसै भगवान्् विष्णुले उनको अहङ्कारलाई छिन्नभिन्न पारी सामान्य गृहस्थ किसानमा पनि प्रभुप्रति चोखो निष्ठा र पवित्र प्रेमको गङ्गा भरिएको हुँदोरहेछ भनेर स्पष्ट पारिदिनुभयो, त्यसपछि मात्र उनीभित्र वास्तविक प्रेमको मूल फुट्यो र आफ्नो अहंप्रति उनलाई गहिरो पश्चात्ताप बोध भयो ।
भक्ति गर्नका लागि उमेर पुग्नुपर्छ वा धर्म गर्नका लागि घरपरिवार, धनसम्पत्ति र इष्टमित्र त्याग्नुपर्छ भनेर अनेक बहाना बनाई अध्यात्मको यात्रा गर्न खुट्टा कमाउनेहरुका लागि पनि यो दृष्टान्त प्रेरक बन्न सक्छ । हामी मन्दिर खोज्न अन्यत्र जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, खेतमा हलो जोत्दाजोत्दै पनि नारदभन्दा श्रेष्ठ भक्त बन्न सक्छौँ हामी । रातदिन मन्दिरमा बसेर पनि एकछिन प्रभुको स्मरण हुन नसक्नुभन्दा, रातदिनको कामको चटारोका बीचमा पनि एकछिन मात्र प्रभुको स्मरण गर्नु ठूलो कुरा हो । गृहस्थ भएर पनि भक्त बन्ने कुरा सजिलो छैन । त्यसैले, हलो जोत्ने हली किसान नारदभन्दा भगवान् विष्णुका लागि सर्वश्रेष्ठ भक्त हुन पुग्यो ।
हामीले घर छोड्दैमा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने होइन । प्रस्तुत दृष्टान्त घरमै बसेर घरका सम्पूर्ण कामधन्दाका बीचमा पनि हामीले कसरी श्रेष्ठतम भक्ति गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने विषयको विशिष्टतम नमुना हो । गेरू वस्त्र धारण गर्दैमा, प्रवचन गरेर हिँड्दैमा वा घर छोड्दैमा कोही धार्मिक, आध्यात्मिक वा परमेश्वरको सच्चा उपासक बन्न सक्दैन भन्नु प्रस्तुत दृष्टान्तको दर्शन हो ।